ပန်ဒိုရာ: ပန်ဒိုရာ ဘာကောင်လဲ
((အကောင်းဆုံးအချက်။ ။ မိမိစိတ်ဝင်တစား ခင်မင်လိုသူ တစ်ဦးဦး တွေ့ပါက နှစ်ရှည်လများပင် ကြိုးစားရပါစေ၊ စိတ်ရှည် သည်းခံစွာ မရရအောင် လိုက်လံခင်မင်တတ်သည်။ ထိုသူများသည် ကံကောင်းသူများ ဖြစ်သွား တတ်သည်။))
အဲဒီ ကံကောင်းသူများထဲ ဂျစ်တူးလေး ပါလားဟင်း)
ဟား အတော်ပဲ Ms.ပန် ကို ကျွန်တော့် အလုပ်တွေလွှဲပေးရမယ် ဆရာလုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ ဒါနဲ့ ခင်ဗျား ဟောက်လဲ ဟောက်တတ်တယ် မဟုတ်လား ဒါဆို ပိုအဆင်ပြေမယ် လူတွေကို ဟောက်ရတာ အင်မတန် ကောင်းတာကိုး ဗျ။ ဟား ဟား ဟား မပန်ရေးထားတာ ဖတ်လို့ ကောင်းပါ့ဗျာ အကြွေးရှင်နားပူတယ်တဲ့ မိုက်တယ်ကွာ လန်ထွက်နေတာပဲ အဟက်ဟက်ဟက် ကျေးဇူးပါမပန်
ဟားဟား.. ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ မောသွားပြီ :)
ပန်ဒိုရာရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်က တယ်လဲ မဇ္ဇျိမ ပဋိပဒါ ကျလေချေလား။ ဥပမာ- မချွန်လွန်း၊ မပြားလွန်း၊ မကြီးလွန်း၊ မသေးလွန်း၊ မနိမ့်ပါ။ မမြင့်ပါ။ ဧကန္တ မဇ္ဇျိမ ကျွန်းသူဘဲ ဖြစ်ခြိမ့်မည်။
လျို့ဝှက်တတ်သည်ဆိုသော်ငြား မပိရိသဖြင့် ပန်ဒိုရာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်သွားပါပြီ။ ဟိုတနေ့က မြို့ထဲမှာသွားတော့ “ပန်ဒိုရာသေတ္တာထဲမှာ ဘာရှိသလဲ” ထဲက လက်ကိုင်အိတ်ကိုလွယ်သွားတာ တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒန်တန့်ဒန်….။
မပန်ပုံကို စိတ်မှန်းနဲ့ ပုံဖေါ်ထားတာရှိတယ်။ http://tinyurl.com/2dpfdy အဲဒီမှာကြည့်နော်။ ကျွန်တော်လည်း ကံကောင်းသူဖြစ်ပါရစေ။
ဂျစ်တူးပြောသလို ကျွန်တော်လည်း ကံကောင်းသူထဲမှာ ပါပါသလား။
ဇီးရိုးပြောသလို ရေးထားတာက အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
ညီညီပြောသလို ဖတ်ပြီး ရီနေရတယ်။
ကိုပေါ ပြောသလိုကျွန်တော်လည်း တွေ့လိုက်သလိုပဲ.. ဟီး
မောင်ပွတ်က စိတ်မှန်းတော်တယ်နော်။ ဟီးဟီး
ကျွန်တော်သိသော ပန်ဒိုရာ သည် အားပေးအားမြှောက်ပြုရာတွင် အင်မတန် တော်၏။ စာမရေးတတ်သော ကျွန်တော့်ကို စားရေးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းသူထဲတွင် သူက ထိပ်ကပါသည်။ (ပုံရိပ်၏ စကားနဲ့ဆို ကျွန်တော် လူမိုက်ဖြစ်နေပါပြီ)
ပန်ဒိုရာသည် စာရေးခြင်းတွင် အင်မတန်တော်သည်။ အနုပညာမြောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်သည်။ (လေတိုက်သည်၊ မိုးရွာသည်ကို စာတပုဒ် ဖြစ်အောင် ရေးဖွဲ့တတ်သည်။)
၅မီနစ် အတွင်း ကဗျာကို ဘာသာပြန်ပေးသည်ကို လက်တွေသိလိုက်တော့ စိတ်ပါလျှင် ချက်ချင်းလုပ်တတ်သည်။ (သတိ ခြေမြန်လက်မြန်ရှိသည်။)
အချုပ်အားဖြင့် ကူညီတတ်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမကြီးဖြစ်ပါသည်။ (ဟီး…တွေ့ရင် မုန့်ကျွေးမယ်လို့်)
ပညာရှိများအား စော်ကား မော်ကား ပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ဥပမာ။ ။(မောင်တက်စ်တို့လို အရုပ်ဆိုးစွာ ကားခြင်းမဟုတ်.. ခွိခွိ၊)
ဒီမျှားက ပန်ပန့်ဆီလဲ ရောက်သကိုး...
ကံကောင်းသူထဲ အမပါတယ်နော် ဟဟ..
အမကတော့ ဓါတ်ပုံပိစိလေးကို မြင်ဘူးပါတယ်..
ဟိ... ဒါမဲ့ ဘာကိုမှ မသဲကွဲ...
ရီလိုက်ရတာ မပန်ရ.. ရေးလည်းရေးတတ်ပါ့... မပန်က ကြိုးစားပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံစွာ မရရအောင် လိုက်ခင်မင်တဲ့ ကံကောင်းသူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ... ?? :)
ပန်ဒိုရာ ဘာကောင်လဲ လာစပ်စုသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံး ကံကောင်းကြမှာပါ။
အိတ်လွယ်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ် ဆိုသူများ . အဟတ်ဟတ်.။
(မျက်နှာပေး။ ။ အလေးအနက် စဉ်းစားနေချိန်တွင် မှုန်ကုတ်ကုတ် ရှိတတ်။)
ဒါဆို ဒီက အမြဲတန်း အလေးအနက် စဉ်းစားနေသည့်ပုံ။ :P